Madaxweyne Farmaajo oo baaq aan dhagaha ku cusbeyn Markale u diray shacabka Soomaaliyeed? | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Madaxweyne Farmaajo oo baaq aan dhagaha ku cusbeyn Markale u...
Madaxweyne Farmaajo oo baaq aan dhagaha ku cusbeyn Markale u diray shacabka Soomaaliyeed?
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (farmaajo) ayaa shacabka Soomaaliyeed wuxuu ugu baaqay in ay ka qeyb qaataan Dagaalka ka dhanka ah ee lagula jiro ururka Al-shabaab.
Wuxuu sheegay Madaxweyne Farmaajo hadii Madaxda Dowladda iyo kuwa Maamul Goboleedyada ay isla qaateen istiraatiijiyad mideysan in shacabka qeybahooda kala duwan dhankooda looga baahan yahay garab siinta Ciidanka xoogga dalka.
Sidoo kale Madaxweynaha Soomaaliya ayaa Ciidamada Dowladda ka dalbaday in ay adkeeyaan ammaanka dalka meelna looga soo wada jeesto xoraynta Dalka iyo la dagaalanka ururka Al-shabaab.
Shir Magaalada Muqdisho uga socday Madaxda Dowladda dhexe iyo Maamul Goboleedyada mudo ku siman Todobaad oo shalay la soo gaba gabeeyay ayaa qodobadii lagu heshiiyay waxaa ka mid ahaa la dagaanka Shabaab, Dhismaha Ciidan iyo dardar gelinta hirgelinta qorshaha amniga.